Popular HTC amafoni: ukubuyekezwa kanye Izinzuzo
Omakhalekhukhwini kukhona ngakho uvalwe ekuphileni kwethu ukuthi akukho muntu eside abangathanda ukusebenzisa lolu hlobo lokuxhumana. Ngenxa wakhe, ungahlala uhlale uthintana obathandayo ngaphandle kwezinkinga.
Omunye amadivayisi multi-umsebenzi kalula bakwamukele ephaketheni lakho, iyona amafoni HTC cell. HTC Corporation yasungulwa ngo-1997 futhi producer amadivayisi owaziwa adumile hamba ngaphansi amagama opharetha mobile ahlukahlukene. It ibambisane ehola izinkampani iselula, okubandakanya opharetha ngobukhulu emasontweni aseYurophu futhi Emerging Asia opharetha.
Ngo-2006, inkampani waqinisa uqhekeko olukhona ngaphakathi European ngaphansi kwegama elilodwa, ukuze amise nokubambisana abalingani kanye nabasebenzisi impahla ezifana HTC amafoni. Izibuyekezo zibonisa ukuthi, kuze kube manje HMRC waqaphela njengoba umholi somhlaba enkulu ekwakhekeni esekelwe Microsoft Windows® Ucingo amadivaysi. Ngaphezu kwalokho, ingenye abameleli ashukumisayo kakhulu kumadivayisi eselula. Ukukhiqizwa kwe-Taiwan smartphone brand kakhulu abathintekayo lonke kule mboni, ikakhulukazi amadivayisi esekelwe Windows Phone 7. Uhlelo kuyinto entsha, ngcono futhi wadala kusuka ekuqaleni.
Amandla esikhulu kunazo zonke NTS electronics ngokwanele okusezingeni eliphezulu Yakha imfanelo kuhlangene Ukucaciswa enamandla. Umenzi akesabi ulinge futhi adale onobuhle ezintsha kanye nezixazululo, futhi lokhu edonsela abathengi amafoni we-HTC. Izibuyekezo bathi kukhona butsakatsaka ubuchwepheshe. Okokuqala, lokhu kusebenza ikhamera. Nokho, siyazi ukuthi ubuchwepheshe akuyona ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki, futhi le nkampani, abawona global futhi inani ezicini ezinhle abangaphezu kuka-okungekuhle. Yingakho iminyaka engaphezu kweyishumi edlule inkampani elaziwayo elincane ukwaze ukufinyelela ezingeni emhlabeni futhi balondoloza isikhundla salo.
okunezinhlobonhlobo elikhulu amafoni womkhiqizo izigaba eziningana. Ngokwesibonelo, uchungechunge Touch yakhelwe abantu, kanye izingcingo ngokusebenzisa i-Internet. Ngakho-ke, amadivaysi babe ngokunemba high touch screen, okuyinto ikuvumela ukwenza imisebenzi ehlukahlukene on the imenyu. Lolu hlobo lwe-screen bunozwela touch, lokhu kwehlisa isibalo izinkinobho ocingweni, futhi zonke izinyathelo eziyisisekelo ukwenza uxhumene. Ukuze usebenze, ungasebenzisa umunwe wakho siqu noma insimbi yokuloba, okungadingi bhala noma kulimaze amafoni we-HTC. Izibuyekezo bathi ukusetshenziswa touch izikrini kuyinto enembile ngisho kubasebenzisi imfundamakhwela.
Abanye onobuhle yalesi brand amafoni ziphawulwe izinhlamvu "P" futhi "S". Naphezu kweqiniso lokuthi Babukeka njengezihlahla amafoni abavamile, banayo eningi izici ezintsha: amahora okungenani 400 eceleni futhi kakhulu ngendlela 5 amahora esimweni esisebenzayo. Ngaphezu kwalokho, i umhleli neqoqo egcwele ngokuphelele yonke imisebenzi ezidingekayo anemisila HTC amafoni, ukubuyekezwa abonisa ukuthi kuzo kukhona alamu, ikhalenda, rekhoda, wokubala. Inzuzo enkulu ukuthi kungenzeka ukwenza esingenamkhawulo okufakwe ifonibhuku.
amafoni HTC ngokuphindiwe kungase kutholakale umsebenzi wabo izinga ezimweni engavamile neze, kodwa njenganoma iyiphi yobuchwepheshe, ngezinye izikhathi ukulungiswa ezidingekayo. Zokugwema ukuphuka ezimweni ezingajwayelekile iphutha umenzi, ngokuvamile ngenxa yokushayela budedengu umnikazi we-HTC. Izibuyekezo abonisa ukuthi izikhungo isevisi ye-brand ngaphandle kwezinkinga ukulungisa amafoni eziphukile usebenzisa imishini yesimanje. Ngalo ngeke ukuxilonga iphutha, futhi amakhosi iqembu ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze akuqede.
Ukubuyekezwa kwe Blackberry 9780 smartphone: incazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Indlela ukuvuselela "Vayber" ocingweni: amathiphu, iseluleko, imiyalelo,
Kufanele I ukuthenga Prestigio ifoni? Ukubuyekezwa kwe amamodeli engcono Izibuyekezo ngazo
Indlela ukudlulisa izithombe kusuka iPhone iPhone ngezindlela eziningi
Smartphone "Lenovo A526": Ukucaciswa, ukubuyekezwa
"747-400": isikimu Ingaphakathi
Wamabele - ukuthi ... Izimbangela, izimpawu kanye nokuvinjelwa mastitis
Ngokuqondene "Beeline" funda izindleko: izindlela eziyisisekelo, izici kanye nokubuyekeza
Likuphi zigcine igolide Russia? Ezigcina igolide Russia: Ulwazi
"Barnaul" (spa) ukwelashwa, ukubuyekezwa, amanani, izithombe kanye website esemthethweni
Umuthi cocoa. Lapho ikhula kwesihlahla cocoa? izithelo ukhokho
UGrigory Pechorin kanye namanye amaqhawe yokuhlaziya. "Hero Lwesikhathi Sethu" inoveli Lermontov sika